qaraxyo lagu dilay askar isugu jirta Uganda iyo puntland – Shabakadda Amiirnuur
qaraxyo lagu dilay askar isugu jirta Uganda iyo puntland
November 11, 2020 6:29 am by admin Views: 43
ugu yaraan hal askeri ayaa ciidamada uganda uga dhintay duleedka Deegaanka Shalaan-bood ee Gobalka Shbeelaha hoose Gaari gaashmaanna waa looga gubay kadib qarax Halkaa ka dhacay.
Qaraxa waxaa fulisay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo dagaal kula jirta Shisheeyaha Dalka kusoo duulay iyo Soomaalida la shaqeysa.
Waxaa la aaminsan yahay in khasaaraha qaraxa ka dhashay intaa la balaaran yahay iyadoo horay Gobalka ay uga dhaceen weeraro iyo qaraxyo dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyay Ciidamada Uganadha ee duulaanka ku jooga.
Dhinaca kale qarax ayaa ciidamada Puntland lagula beegsaday Buuraha Gal gala ee Gobalka Bari.
Qaraxa oo shalay dhacay ayaa haleelay Gaari nooca Ciidamada isticmaalaan ah waxaana la sheegayaa in lagu burburiyay.
Ciidamadii sarnaa ayaa la rumeysan yahay in ay dhimasho iyo dhaawac ay noqdeen waxaana qaraxu dhacay xilli Gaarigu ku socday wado ay isticmaalaan Ciidaamada puntland oo gasha farisiin ay halka aku leeyihiin.
Dhanka kale faah faahin ayaa ka soo baxeysa duqeyn habeen hore Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay la beegsatay Ciidamada Puntland.
12 madfac ayaa ku hoobtay Xero Ciidamada puntland leeyihiin oo Gal gala ku taala waxaana la xaqiijayay in laba Gaari oo xerada Tiil ku gubteen.
Waxaa suura gal ah in khasaaruhu intaas uu ka badan yahay waxaana Maamulka Puntland Ciidaamdiisu horay ula kulmeen weeraro kala duwan oo khasaarooyin lagu gaarsiiyay kuwaasoo ay fulisay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.